अहिले को पुस्ता साधना गर्दैनन् – नबिन के भट्टराई – Fursad Nepal
अहिले को पुस्ता साधना गर्दैनन् – नबिन के भट्टराई
May 26, 2017	Featured, Interview, Nepali Music News, फुर्सद फिल्मी 739 Views
संगीतको बजारमा सुनिन्छ, गायक नवीन के भट्टराई केही वर्षपहिले जति सुनिन्थे, त्यति अहिले चलेका छैनन् । तर, यसको अर्थ के होइन भने नवीनले गीत गाउनै छाडे वा कन्सर्टमा देखिएका छैनन् । उनले त पप गायनमा बेग्लै पहिचान स्थापित गरिसकेका छन् । तर, आजभोलि त्यति नदेखिने यी गायक केमा व्यस्त छन्, उनी के गरिरहेका छन् त ?
पछिल्लो समय तपाईंका गीत खासै आएका छैनन् । कतिले त तपाईं हराउनुभयो पनि भन्छन्, के यो साँचो हो ?
होइन, म हराएको छैन । म संगीतबाट टाढा रहने ‘चान्स’ नै छैन । अहिले पनि म गीत–संगीतमा नै व्यस्त छु, देश–विदेशमा लाइभ कन्सर्टहरू गरिरहेको छु । खासमा मेरो गीत बाहिर नआएको चाहिँ यही व्यस्तताले हो । कतिसम्म भने कम्पोज भइसकेका गीत पनि स्टुडियोसम्म गएर रेकर्ड गर्न पनि समय छैन । केही अघि म जापान गएर आएँ, अहिले पनि कन्सर्टको ‘डिल’ गरिरहेको छु । म ट्र्याकमा गाउँदिनँ, त्यसैले ब्यान्डसँग तयारी गर्नुपर्छ । अनि अत्यन्त व्यस्त भइन्छ।
तर, तपाईंको नयाँ गीत÷एल्बम नआएको धेरै भयो नि ?
यसको अर्थ मैले गीत नै नगाएको भन्ने होइन । एल्बम ननिकालेको चाँहि अलि लामै समय भयो । गीतहरू त कलेक्सनतिर आइरहेकै छन्, श्रोताको माया पाएकै छु ।
यसको अर्थ के नेपाली संगीत क्षेत्रमा परिवर्तन आएको हो ? अब एल्बम नै निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन, कि के फरक देख्नुहुन्छ ?
मेरो पहिलो एल्बम ‘रहर’ निकालेको २० वर्ष भयो । त्योभन्दा पहिला पनि म ‘इंग्लिस’ गीत गाउँथेँ । त्योसहित जोड्दा २५ वर्ष भयो, म संगीत क्षेत्रमा लागेको । पहिला नवीन भाइ थिएँ । पछि नवीन भएँ । अहिले दाइ भएको छु । केही समयपछि नवीन अंकल हुन्छु । यही त हो फरक, सम्झिँदा रमाइलो लाग्छ ।
केही वर्षमै सयौँ गीतमा स्वर दिने गायक पनि हाम्रैमा छन्, तर तपाईंले त यति लामो समयमा पनि संख्यात्मक हिसाबमा थोरै गीत गाउनुभएको रहेछ नि ?
हो । म कम गीत गाउने गायकमा पर्छु । म क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटीमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकाले यस्तो भएको हो । यही भएर पनि मैले गाएका प्रायजसो सबै गीत श्रोताले रुचाउनुभएको छ । यसैमा खुसी छु । म धेरैभन्दा पनि राम्रो गाउने कोसिसमा लागेँ । अहिले पनि म त्यही कोसिसमा रहन्छु ।
समयसँगै सबै कुरा परिवर्तन भइरहेका छन् । गीत–संगीतमा २० वर्षअघि र अहिलेको फरक चाहिँ के पाउनुभएको छ ?
धेरै फरक छ । पहिला हामी रिहर्सल घन्टाैँ गथ्र्यौं । र लाइभमा गीत गाउन जाँदा पनि त्यहीअनुसारको प्रस्तुति हुने गथ्र्यो । अहिले सबै गायक छन् । सफ्टवेयरमार्फत गीत रेकर्ड गराउँछन् । सबैको गीत उस्तै हुन्छ । यसले गर्दा साधना गर्ने बानी छैन, अहिलेको नयाँ पुस्तामा । लाइभ गाउन पर्‍यो भने गाह्रो हुन्छ । मैले त्यस्तो धेरै सुनेको त छैन, तर जति सुनेको छु त्यसलाई हेर्ने हो भने म कलात्मक मान्दिनँ ।
तपाईंचाहिँ कस्तो गीतलाई कलात्मक मान्नुहुन्छ ?
जसले ‘ह्युमेन फिल’ दिन्छ । अहिलेका गीत–संगीतले फिल दिनेभन्दा पनि म्युजिक भिडियोलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाउँछु । शब्द संगीतलाई मेलोडियस बनाउनुको सट्टा म्युजिक भिडियो कसरी राम्रो बनाउने भन्नेतिर फोकस भएको पाएको छु । जुन मेरो लागि गलत हो । पहिला शब्द र संगीत राम्रो, त्यसपछि म्युजिक भिडियो हो भन्ने मान्यता राख्छु म ।म पहिला ट्युनिङ गरेर मात्र शब्द लेख्ने व्यक्ति हुँ । अरूलाई लेख्नु लगाउँदा पनि पहिला ट्युनिङ सुनाएर मात्र लेख्न लगाउने गरेको छु । कत्ति त झर्को पनि मान्छन् । जसले गर्दा मेरो लागि शब्द र संगीत उस्तै प्राथमिकतामा पर्छ ।
एकै समयमा संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका धेरै गायक गीत–संगीत क्षेत्रबाट टाढा छन् । कस्तो लाग्छ ?
हो । धेरै जसो विदेशमा हुनुहुन्छ । सायद उहाँहरूको व्यक्तिगत समस्याले गर्दा पनि होला । विदेशमा भइसकेपछि खास फुर्सद पनि हुँदैन । कतिपय साथीहरूले व्यस्त समय मिलाएर भए पनि एउटा–दुईटा गीत गाइरहेका हुन्छन् । दुःख लाग्छ । सबै यहाँ भइदिएको भए संगीत क्षेत्रमा नै भएको जस्तो त लाग्थ्यो । तर, आ–आफ्नै बाध्यता हो ।
उनीहरू नभएको कारण एक–अर्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेन भन्ने त छैन ?
होइन । गीत–संगीतमा कहिल्यै पनि त्यस्तो कम्पिटिसन हुँदैन । सबैको आ–आफ्नै शैली हुन्छ । फरक–फरक आवाज हुन्छ । श्रोताले आफ्नो रोजाइअनुसारको गीत सुन्ने हो । त्यसैले हामीबीच प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन । प्रतिस्पर्धा त मिडियाले बनाइदिने हो । गायक, संगीतकारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैन भन्ने लाग्छ ।
अहिलेसम्म धेरै अवार्डहरू पाउनुभयो । यसले तपार्इंको गायकीमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
अवार्ड भनेको स्रष्टालाई गरिने सम्मान हो भन्ने लाग्छ । पहिला पहिला पाउने अवार्डले प्रत्यक्ष प्रभाव पाथ्र्यो । त्यसवेला अवार्ड पनि धेरै थिएन । तर, अवार्डको महत्व एकदम धेरै थियो । पहिला हामीले कुनै अवार्ड पायौँ भने एक हप्तामा हाम्रो एल्बम २५ देखि ३० हजारसम्म बिक्थ्यो । अवार्डको महत्व एकदम हुन्थ्यो । लोकप्रियता धेरै थियो ।अहिले त अवार्डको मतलब नै हुन्न । फेरि अहिले अवार्ड वितरण यति धेरै हुन्छ कि कसले केमा पायो थाहै हुन्न । मलाई पनि अवार्ड सोमा सहभागी हुन निम्तो आउँछ । कतिपय कार्यक्रममा त गएको छैन । काम हेरेर सम्मान गरौँ भन्ने लाग्छ । प्राप्त गर्नेले पनि गर्व गर्न सकोस्जस्तो लाग्छ ।
संगीत क्षेत्रमा लागेपछि धेरै प्रविधिको परिवर्तन देख्नुभयो/अनुभव गर्नुभयो । कस्तो लाग्छ ?
मैले धेरै परिवर्तन देख्नुको साथै अनुभव पनि गर्न पाएँ । रमाइलो लाग्छ । पहिला क्यासेट निकाल्थ्यौँ । त्यसपछि सिडी आयो । अहिले पेनड्राइभसम्म आइपुग्दा आफैँलाई अचम्म लाग्छ । यी सबै प्रविधिको विकासमा काम गर्न पाइयो । कुनै पनि पुरानो चिजबाट नयाँ चिजमा जाँदा गाह्रो त हुन्छ । तर, बिस्तारै सहज हुन्छ । एक–दुई वर्ष असहज भए पनि बिस्तारै फ्यामिलिएर भइन्छ । समयअनुसार परिवर्तन स्विकार्नुपर्छ । विश्व भर्चुअल भइसक्यो । यो सकारात्मक कुरा हो ।
एकै प्रकारको गीत गाउँछ भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि ?
हो, लाग्ने गरेको छ । तर, म यसलाई स्विकार्दिनँ । मैले गाउने संगीत, शब्द फरक हुन्छन् । शैली पनि फरक छ । गाउने म हुँ, आवाज मेरै हो । त्यसैले भ्रम पर्न सक्छ । मैले गाउने भनेको नै पप गीत हो । पप गीतलाई म लोकशैली, आधुनिक शैलीमा गाउँदिनँ । पप शैलीमै गाउँछु । फरक हुन त कि आधुनिक कि लोकगीत गाउनुपर्ने हुन्छ ।
nabin bhattarai nabink k bhattarai navin bhattarai pop singer nabin	2017-05-26
Tags nabin bhattarai nabink k bhattarai navin bhattarai pop singer nabin
Previous राजन राज ले “कुटु मा कुटु,सुपारी दाना” लिएर आउदै
Next खहरे खोला जस्तो हुन चाहन्न : मोडल रन्जु